China Judah kiln -300T / D yekugadzira mutsara -EPC chirongwa fekitori uye vagadziri | Judha
Batcher maitiro: dombo nemarasha zvinotakurwa zviendeswe kudombo uye marasha cache migomo nemabhanhire; Dombo rinorema rinobva rapinzwa mubhanhire rekusanganisa kuburikidza neye feeder.Marasha akayerwa anopinda mubhanhire rekuvhenganisa kuburikidza neyakagadzika bhandi feeder.
Kudya system: ibwe uye marasha zvakachengetwa mubhanhire rakasanganiswa zvinotakurwa kuenda kune hopper, iyo inoshandiswa newavha kuita iyo hopper kutenderera kumusoro nekudzika kwekudyisa, iyo inovandudza huwandu hwekutakura uye inowana kugona kwakanyanya nekuchengetedza simba.
Kugovera system: musanganiswa wedombo uye marasha unodyiswa mukati meye buffer hopper kuburikidza neye feeder uye mune iyo rotary feeder. Iko kusanganiswa kunodyisirwa zvakaenzana muchikamu chepamusoro chemoto kuburikidza neakawanda-poindi rotary feeder.
Lime zvaikosha hurongwa: mushure mekunge calcined lime dombo ratonhorerwa, iro rakapedza lime rinoburitsirwa kune iro raimu rinoburitsa bhandi neane-mativi ekudzikisa muchina uye zvikamu zviviri zvemweya wekuvhara vharuvhu. Mukana wekubvisa-pfuti, iko kutungamira uye huwandu hweremi inoburitswa inogona kugadziriswa kuti ibudirire-kupfura uye yakakosha-kudhonza.
Guruva kubvisa system: mushure mekufemerwa dhiri fan, guruva rine hutsi uye gasi kutanga kuburikidza nedutu guruva muteresi kubvisa zvidimbu zvidiki zveguruva; Wobva wapinda muhomwe firita kuti ubvise zvidiki zvidiki zveguruva; Mushure mekupinda mumvura firimu precipitator, iyo flue gasi inozora iyo firimu yemvura nguva dzese, uye mweya weguruva unonyoroveswa. Ichapinda pasi peguruva precipitator nekuyerera kwemvura uye inozoburitswa mutsementation tangi. Mushure mekunaya, mvura yakachena ichagadziriswa zvakare.
Electric kudzora system: kutora chiGerman Siemens komputa yekudzora system, yakazara otomatiki yekugadzira tambo, yekuchengetedza-mutengo, yakatsiga chigadzirwa mhando.
Pashure: Lime Kiln Kugadzira Line Gungano
Zvadaro: Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 zvakatipoteredza zvine hushamwari lime lime yezvigadzirwa zvemitsara
Kuverenga Lime Kiln
Lime Kiln Mudziyo
Lime Kiln Zvishandiso
Lime Kiln Mutsetse
Lime Kiln Vagadziri
Lime Kiln Maitiro
Lime Kiln Kugadzirwa
Vertical Lime Kiln Mudziyo
Cache System Iyo hopper muviri ndeye quadrilateral chimiro, iyo yemukati madziro inopihwa neyakavhiringika ndiro, iyo isina kuvhara chiteshi inoumbwa pakati peiri padhuze maviri anokanganisa mahwendefa, uye wezasi magumo einotevera dura yeiyo yekukanganisa ndiro inopihwa ine inoyeredza skrini . Maumbirwo emidziyo ari nyore, anogona kuona mashandiro e buffer uye yekuchengetedza kwenguva pfupi kuburikidza neplate isina kugadzikana, izvo zvinhu zvinowira pasi pechidzitiro chinotetereka chakanyanya yunifomu, basa racho ndere pro ...
6.Horizontal feeder Iyo yakatwasuka Distributor yemuvhiri muviri ine yakasarudzika mamiriro. Inogona kusanganisa limestone uye marasha zvakaenzana, inodonhedza yakatarwa nzvimbo kune preheating zone iri pamusoro pehusiku, uye iyo nzvimbo yepamusoro yakatwasuka uye yakatsetseka, kuitira kuti dombo remarasha ripiswe uye ripiswe zvakaenzana. Toni yega yega inochengetedza anopfuura gumi nemashanu Kg yemarasha zvichienzaniswa nedzimwe nzira dzekuparadzira Vagadziri, zvinopisa uye zvimwe zvekushandisa zvemalimu kilns: Midziyo mikuru yekubatsira yeiyo lime kiln iri kundipa kudya.
Karusiyamu Hydroxide Equipment, Karusiyamu oxide Uye Calcium Hydroxide, Kugadzira Calcium Hydroxide, Zita Rekutengesa ReCalcium oxide, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira Line Equipment,